खोप बनाउन नेपालमै सम्भव छ, के-के चाहिन्छ पूर्वाधार?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। साउन २४ गते सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘खोप प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची–९ को क्रमसंख्या थप गरी ‘खोप उत्पादन गर्ने उद्योग’ उल्लेख गरेको छ। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथामका लागि विश्वव्यापी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ जसमा नेपाल पनि सहभागी भइरहेको छ।
संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा विभिन्न देशबाट कोरोना भाइरसविरुद्धका खोप भित्रिने क्रम जारी छ। खोपका लगि विभिन्न देशसँग सहयोग माग्दै गर्दा सरकार स्वदेशमै खोप प्रयोगशाला स्थापनाको तयारीमा लाग्न थालेको छ। उसो त अहिलेसम्म मानिसमा लगाइने कुनै पनि खोप नेपालमा बन्ने गरेका छैनन्। तर, पशुपक्षीमा लगाइने खोप भने नेपालमै बन्छन्।
पशुपक्षीका लागि खोप उत्पादन राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रगोगशालाले गर्दै आएको छ। पशुपक्षीका लागि बर्सेनि खोप उत्पादन हुँदै गर्दा मानवका लागि पनि खोप उत्पादनका लागि पर्याप्त स्रोत साधन भएको खण्डमा मात्रै सम्भव हुने राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रगोगशालाका निर्देशक डा. उमेश दाहालले बताए।
‘असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। मिहिनेत गर्नुपर्छ सबै कुरा गर्न सकिन्छ। खोप उत्पादनका लागि सबैभन्दा पहिला प्रयोगशाला हुनुपर्‍यो। त्यसको न्यूनतम बीएसएल–थ्री ल्याब चाहिन्छ। त्यसका लागि त्यस्तै जनशक्ति पनि चाहिन्छ’, उनले भने, ‘हामीसँग बीएसएल–टू ल्याब छ। त्यसैले हाम्रो ल्याबबाट उत्पादन गर्न सकिँदैन। सायद सरकारसँग खोप प्रयोगशालाका लागि पूर्वाधार छ या त्यसका लागि तयार गर्दै हुन सक्छ।’
डा. दाहालका अनुसार सरकार खोप उत्पादन प्रयोगशालाका लागि तयारीमा जुट्दै गर्दा अन्य कुनै प्रयोगशाला स्तरोन्नति गर्ने सोच बनाएको पनि हुन सक्छ। प्रयोगशालामा गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, कुकुरलगायत घरपालुवा जनावरसहित १४ प्रकारका खोप उत्पादन भइरहेका छन्। प्रयोशालामा उत्पादन हुने सबै खोप ब्याक्टेरिया र भाइरसजन्य रोगविरुद्धका लागि भएको डा. दाहालले बताए।
हालसम्म नेपालमा मानवका लागि खोप उत्पादन हुँदै नआए पनि खोप उत्पादनका लागि प्रयोगशाला स्थापना सम्भव रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले भनेझैँ नेपालमै खोप उत्पादन गर्नका लागि प्रयोगशाला स्थापना सम्भव रहेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए।
उनले भने, ‘नेपालमा खोप प्रयोगशाला सम्भव छ। हामीसँग पशुपक्षीका लागि पहिलेदेखि नै छ। जसरी पशुपक्षीको सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसरी नै मावनका लागि पनि यो उत्तिकै सम्भव छ।’ अहिले खोप प्रयोगशालाकै लागि आफूहरू अध्ययनमा जुटिरहेको उनले बताए। ‘यो बारेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ।
अहिले भइरहेका प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गर्ने वा नयाँ प्रयोगशाला निर्माण गरी उत्पादन गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’, केसीले भने, ‘हामीसँगै भएका प्रयोगशाला स्तरोन्नति पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ।’ विभागका अनुसार खोप प्रयोगशालाको अनुमति सरकार वा इच्छुक निजी उद्योगलाई दिइनेछ। जसका लागि आवश्यक प्रयोगशालाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न थालिएको छ।
यस्तै, स्रोत साधन भए खण्डमा नेपालमा खोप प्रयोगशालाको सम्भावना रहेको औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘प्रयोगशालाका लागि स्रोत साधन प्राप्त गर्ने हो भने नेपालमा खोप प्रयोगशाला सम्भव छ। तर, प्रयोगशालाको कुरा गर्दै गर्दा हामीले आर्थिक रुपमा पनि हेर्नुपर्छ। र, विश्वमा भइरहेको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ।’
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप मात्र नभएर नेपालमा अन्य खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ। ‘कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप मात्र नभई बालबालिकामा प्रयोग हुँदै आएका खोपलगायत विभिन्न खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा खोप प्रयोगशाला स्थापन हुनु औषधिको आयाममा नेपालले फड्को मारेको भन्ने बुझ्नुपर्छ’, उनले भने।
यस्तै, नेपालमा खोप विकासको सम्भावना नभए पनि अन्य देशमा विकास भइरहेका खोपलाई उत्पादन भने गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर, खोपको विकास र उत्पादन फरक कुरा हुन्। लामो प्रक्रिया खोपको विकासका हुने गर्छ। तर, उत्पादनका लागि भने विकसित भइसकेको खोपको सूत्रका आधारमा विभिन्न देश वा ठाउँमा खोप उत्पादक प्रयोगशालामा खोपको उत्पादन गर्न सकिन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले पनि सोही सूत्रका आधारमा खोप उत्पादन गरिरहेको छ। भारतमा उत्पादन हुँदै आएको ‘कोभिसिल्ड’ खोप बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र भ्याक्सिन उत्पादक एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेका हुन्।
बायो फार्मासिटिकल कम्पनी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले विकास गरेको यो खोप पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकका खोप उत्पादक प्रयोगशालामा उत्पादन भइरहेका छन्। भारतमा उत्पादन गरिएको ‘कोभिसिल्ड’ खोप अभियानको पहिलो र दोस्रो चरणमा नेपालमा प्रयोग गरिएको थियो।